Voina an-dranomamy :: Olona telo tsy hita popoka navadiky ny lakana lehibe • AoRaha
Nivadika ny lakana lehibe iray nitondra entana ilaina andavanandro sy mpandeha miisa efapolo tany amin’ny reniranon’i Manatsatrana, any Fenoarivo Atsinanana, Toamasina, tamin’ny 23 marsa teo. Avotr’ireo fokonolona ny mpandeha fito amby telopolo. Tsy mbola hita hatramin’ny omaly ireo mpandeha telo.
Mpitatitra entana sy olona mampitohy an’Ampasimbe Manatsatrana sy Anjahamarina io lakana lehibe io. Efa lasa ilay lakana no niverindalana haka kitapon’olona iray latsaka tao anaty rano. Teo no nampivadika azy rehefa nidona tamin’ny hazo, araka ny vaovao avy any an-toerana.
Vehivavy iray, 40 taona, monina any AmpasimazavaFenoarivo Atsinanana ny iray tamin’ireo tsy hita, miampy ankizy iray, enina taona, izay tsy fantatra mazava ny mombamomba azy. Tovovavy, 17 taona, monina any Maromitety, kaominina Antsiatsiaka-Fenoarivo Atsinanana ihany ny fahatelo mbola karohina.
Manohy ny fitadiavana azy ireo ny fokonolona any an-toerana, ampian’ny zandary avy any Fenoarivo Atsinanana, hatramin’ny omaly. Nisy koa ny fampahafantarana ireo tanàna manodidina ny renirano. Nanao fombafomba ireo fokonolona tamin’ny famonoana omby teo amin’ilay toerana nitrangan’ny loza. Heverina ho nentin’ny rano ireo olona telo ireo.
Fanararaotana valan’aretina :: Andian’olona mitety trano misoloky ho mpitsabo
Voina teny Tsarasaotra :: Olona roa maty tsy tra-drano voafaokan’ny fiara